1 Samoela 10 - Ny Baiboly
1 Samoela toko 10
Ny nanosoran'i Samoela an'i Sala ho mpanjaka - Saola voafidy tamin'ny filokana.
1Nalain'i Samoela ny tavoara nisy diloilo, naidiny tamin'ny lohan'i Saola, dia norohany izy, sady nataony hoe: Moa tsy nohosoran'ny Tompo ho mpanapaka amin'ny lovany va hianao? 2Rahefa tafasaraka amiko hianao anio, dia hahita olona roa lahy, eo akaikin'ny fasan-dRasely amin'ny faritanin'i Benjamina, any Selsaky, hilaza aminao hoe: Ny ampondra notadiavinao efa hita ka tsy heverin-drainao intsony ny momba ny ampondravavy fa ny aminareo indray no ahiany sy ataony hoe: Inona no tsy maintsy hataoko ny amin'ity zanako ity? 3Avy eo hianao, dia hanohy ny dianao, ary ho tonga ao amin'ny aokan'i Tabora, ka hotsenain'olona telo lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra any Betela: ny iray mitondra zanak'osy telo, ny iray mitondra mofo telo, ny iray mitondra divay iray siny hoditra; 4rahefa avy miarahaba anao izy ireo, dia hanome anao mofo roa, ka horaisinao avy amin'ny tànany izany. 5Manaraka izany ho tonga ao Gabaàn'Andriamanitra hianao, izay misy miaramila Filistina mpiambina. Rahefa miditra ao an-tanàna, hifanena amin'ny mpaminany maro, andiany iray, midina avy any amin'ny fitoerana avo, ialohan'ny lokanga, ampongatapaka, sodina, valiha, sady maminany. 6Hilatsaka aminao ny Fanahin'ny Tompo dia hiara-maminany amin'ireo hianao, ka ho voaova ho olom-baovao. 7Rahefa tanteraka ho anao ireo famantarana ireo, dia ataovy araka izay sendra eo anoloanao fa momba anao Andriamanitra. 8Ary midìna alohako any Galgalà, ary indro fa hidina aho hanatona anao, mba hanatitra sorona dorana mandra-pahatongako any aminao, dia holazaiko aminao izay tokony hataonao.
9Vao nihodina nisaraka tamin'i Samoela Saola, dia nomen'Andriamanitra fo vaovao; ary tanteraka androtr'izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. 10Nony tonga tany Gabaà izy, indreto ny mpaminany maro, andiany iray, nifanena taminy, dia nilatsaka taminy ny Fanahin'Andriamanitra ka naminany teo afovoan'ireo izy. 11Nony hitan'izay rehetra nahalala azy taloha fa niara-naminany tamin'ireo mpaminany koa izy, dia nifampilaza ireo olon-drehetra ireo hoe: Fa naninona ity zanak'i Kisy? Mba isan'ny mpaminany koa va Saola? 12Niteny ny iray teo amin'ny vahoaka ka nanao hoe: Ary iza moa no rain'izy ireo? Izany no nahatonga ilay fitenenana hoe: Mba isan'ny mpaminany koa va Saola? 13Nony efa nitsahatra tsy naminany izy, dia nankeo amin'ny fitoerana avo.
14Ary hoy ny rahalahin-drain'i Saola taminy sy tamin'ity mpanompony: Nankaiza hianareo? Dia hoy ny navalin'i Saola: Nitady ny ampondra izahay, fa nony tsy nahita azy hatraiza hatraiza dia nankany amin'i Samoela. 15Ary hoy ny rahalahin-drain'i Saola: Tantarao amiko izay nambaran'i Samoela taminareo. 16Dia hoy Saola tamin'ity rahalahin-drainy: Nambarany taminay fa efa hita ny ampondravavy. Fa tsy nolazainy taminy ny momba ny fanjakana nambaran'i Samoela azy.
17Novorin'i Samoela ho eo anatrehan'ny Tompo any Masfà ny vahoaka, 18dia hoy izy tamin'ny zanak'Israely: Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitr'Israely: Izaho no nampiakatra an'Israely avy any Ejipta; izaho no nanafaka anareo tamin'ny tànan'ny Ejipsiana, sy tamin'ny tànan'ireo fanjakana nampahory anareo. 19Fa hianareo kosa izao manary ny Andriamanitrareo, izay nanafaka anareo tamin'ny loza amam-pijalianareo rehetra, ary milaza aminy hoe: Manangàna mpanjaka aminay! Koa ankehitriny misehoa hianareo isam-poko sy isam-pianakaviana, eo anatrehan'ny Tompo.
20Dia nasain'i Samoela nanatona ny fokon'Israely rehetra, ka ny fokon'i Benjamina no voafidy. 21Nampanatoniny isam-pianakaviana indray ny fokon'i Benjamina, ka ny fianakavian'i Metrì no voafidy, ary Saola zanak'i Kisy no voatendry. Dia notadiavina izy nefa tsy hita. 22Amin'izany dia nanontany an'ny Tompo indray ny olona hoe: Moa mbola misy olona tonga teto va? Hoy ny navalin'ny Tompo: Indro izy miery ao amin'ny entana. 23Dia nihazakazaka naka azy tao ny olona, ary nitsangana teo afovoan'ny vahoaka izy, dia nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony no ho miakatra. 24Ary hoy Samoela tamin'ny vahoaka rehetra: Hitanareo va ilay voafidin'ny Tompo, fa tsy misy toa azy eo amin'ny vahoaka rehetra! Dia nihoby ny vahoaka rehetra, ka nanao hoe: Ho ela velona anie ny mpanjaka!
25Tamin'izay nasehon'i Samoela ny vahoaka ny fahefana hampiasain'ny fanjakana, sady nosoratany tamin'ny boky, izay napetrany teo anatrehan'ny Tompo. Izay vao nampodiny ny vahoaka, samy ho any an-tranony avy. 26Saola koa nandeha nody ho any an-tranony, any Gabaà, notronin'olona mahery fo, izay nohetsehin'ny Tompo ny fony. Fa ny olon'i Beliala kosa dia nanao hoe: Dia iny ve no hamonjy antsika? Sady naneso azy izy no tsy nitondra fanatitra ho azy, nefa tsy nasian'i Saola raharaha akory izany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0348 seconds